Hindiya: DOCTOR ON DACWEYSO Wicitaanada guriga ayaa dib u laabanaya | India News - TELES RELAY
ACCUEIL » International Hindiya: DOCTOR ON DACWEYSO Wicitaanada guriga ayaa dib u laabanaya | India News
X LinkedInLinkedIn0 EmailEmail1 RedditReddit0 StumbleuponStumbleupon0
Waxaan u qaadan karnaa in ay tahay wax aan macquul aheyn si aad u hesho kanaalka xididka guriga ah, laakiin Dr. Srivats Bharadwaj, ilkaha ku salaysan in Bengaluru, ma aha opinion this. Wuxuu ka shaqeeyaa rugta caafimaadka ee Vatsalya, oo bixisa booqashooyinka guriga ee dhakhaatiirta ilkaha lagu qalabeeysanayo shandado qalab. Dr. Bharadwaj qabaa gaadiidka foosha xumaa ee Bengaluru, oo la xidhiidha tirada fadhiyada in Ilkaha baahidooda inta badan dalbadaan badan ee bukaan-socodka ah oo xanuunsan. Sidaa darteed wuxuu qabtaa adeeggan.
"Waa sida filim madow iyo caddaan markaad tiraahdo" muneem ji ko bulao ". Sugitaanka dadka jirran ee isbitaalkaaga laba saacadood waa xadgudub xaga Xuquuqul Insaanka. Yaa jecel yahay jawiga istiraatiijiga ah? Xanuunku ma dhicin sababtoo ah daawo ayaa lagaa helay, laakiin waa daryeel, kalgacayl iyo naxariis, "ayuu yidhi.
Dr. Bharadwaj maaha kali ah inuu dib u soo celiyo wicitaanka guriga iyo daryeelka guriga ee shakhsi ahaaneed. Xitaa bilawga cusub waxay keenaan casri casri ah iyagoo u oggolaanaya bukaanlayda in ay qaadaan casriga ah oo wac dhakhtarka guriga. Uma baahnid inaad saacado sugto isbitaallada mashquulsan si ay ula kulmaan dhakhaatiirta mashquulka ah ama khatarta caabuqa.
Waxaa sidoo kale jira su'aasha weyn ee aaminaadda. Col A. J Verma Yeeray in uu aabbihiis u tegey inuu soo Sri Lanka soo socda seminar ku saabsan uu ka soo laabtay oo wuxuu ogaaday finan laga cabsado oo dhan jidhkiisa. Waxay u tageen dhakhtar takhasus leh oo laga helay cudurka herpes. Marka maalmood daawo keentay horumar lahayn, waxay ugu dambeyntii soo jeestay dhakhtarka qoyska, ka dib markii ay su'aalo weydiinayeen dheer, xaqiiqsadeen in this ahaa kaliya dareen xaasaasi ah in ay badda iyo oo aan bogsiin lahayn. Sidaa darteed markii Colonel Verma jir 65 sano, ku salaysan ee Delhi, oo waxaa hadhay dhibaato ah harag aad u xanuun badan, wuxuu go'aansaday inuu si FamPhy jeedin, codsi u ogolaanaya dhakhtar si ay u helaan gurigaaga adigoo wacaya ama riixaya.
Colonel Verma ayaa yiri, "Marka Dr. Kalita oo ka yimid Famopy wuxuu yimid gurigeyga, wuxuu 2 ku qaatay saacado 3 isagoo isku dayaya inuu ogaado sheekadayda, sababtoo ah waxaan ahay qof bukaan qaba. Wuxuu soo qaatay aragti aad u xiisa badan, waxaan noqday qof aan ku kalsoonahay. "
Initiatives sida FamPhy ujeedadoodu tahay in uu soo nooleeyo daryeelka caafimaadka guriga ee Hindiya, ma aha oo kaliya loogu talagalay dadka waayeelka ah ama sariirtiisa jiifay, laakiin dadka oo dhan - kuwa isbitaalada mashquul, caajis ama nacaybka. Dr. Soumik Kalita, oo ah aasaasaha FamPhy, ayaa yiri, "Waalidkaygu waa dhakhtar qoys oo daryeeli jiray dadka ku nool meelaha ugu fog dalka. Maanta, waxaa jira dhibaatooyin ku saabsan hoos-u-dhigidda iyo la'aanta daryeel caafimaad oo qof ku salaysan. Markaad tagto qof gurigiisa ah, waxaad aragtaa agagaarahooda, waxaad leedahay fikrad ah taariikhdooda caafimaad iyo kadib markaad go'aansato sida loo daaweeyo. "
Dhismaha caafimaadka gudaha ee Hindiya ayaa kor u kacday. warshadaha ayaa la filayaa in ay gaaraan 6,2 billion dollars by 2020 oo bedeli kartaa ilaa 65% ee booqashooyinka isbitaalka loo baahnayn in Hindiya iyo in la yareeyo kharashka isbitaalka ee 20%, sida laga soo xigtay warbixin 2016 cinwaankeedu Report Healthcare Hindiya CMR Home . daryeelka qalliinka ee daaweynta jimicsiga iyo shaybaarka ee daryeelka caafimaadka dhalida. Qaar ka mid ah bilowga-ups raadinaya in ay carqaladeeyaan caafimaadka deegaanka, halka qaar kalena ay yihiin isbitaalada sida Apollo, kuwaas oo kordhiyay in daryeelka guriga inay la diriraan buux ee isbitaalada.
Portea Medical ayaa daaweysay wax ka badan bukaanada 3,5 ee guriga ku yaala magaalooyinka 16 Indian. Meena Ganesh, Agaasimaha Fulinta, ayaa yidhi, "Sida dalka, waxaan diiradda saareynaa dadaalladeenna ku aaddan maal-galinta daryeelka isbitaalka, laakiin wax kale maahan. Dadka da'doodu u dhaxayso 30aad ama 40s waxay badanaaba ku dhacaan cudurrada daba dheeraada sida sonkorowga iyo dhiig karka waxaanan dooneynaa in aan buuxino baahida dadkan. xitaa sameynta qeybta daryeelka degdegga ah guriga haddii loo baahdo.
Qaar waxay ka walaacsan yihiin isbedelka soo socda. Dr. Sandeep Budhiraja, Agaasimaha Caafimaadka ee kooxda Maxkamadda Caafimaadka sharaxaa in inkastoo ay leeyihiin qaybta daryeelka guriga, caqabadaha qaar ayaa la ogaaday. "Waa qaali in dhakhtarku guriga joogo. Nagu soo booqo, kharashka dhakhtarka MBBS kharashka 3 000, halka khabiirada takhasuska leh 5 000 rupees. Marka ay dadku bixiyaan wax badan, waxay doonayaan in sahaydu ay ku habboonaato, taas oo ah mid adag. Khabiirada ayaa mashquulsan oo doonaya in ay wanaajiyaan waqtigooda. "
Daryeelka Guriga ee Vivek Srivastava wuxuu isbarbardhigayaa kor u qaadka daryeelka caafimaadka guriga ee ganacsiga e-ganacsiga. "Dadku waxay rabaan wax walba oo guriga lagu keeno. Maxay tahay sababta daryeelka caafimaadku uga duwan yahay?
Intaa waxaa dheer, marka la eego kharashka, Srivastava waxay ku doodaysaa in ay ka jaban tahay - sida ku cad xisaabteeda, joogitaanka ICU ee guriga waa 30% ka jaban inta ay ku jiri lahayd isbitaal.
Dr. Bharadwaj wuxuu aaminsan yahay in qiimaha natiijooyinka ku salaysan halkii laga bixin lahaa khidmadii hore loo soo celiyay si loo soo celiyo kalsoonida dhakhtar-bukaanka oo kor u kaca qiimaha iyo dib-u-qorista. Ajay Parikh, oo saddex ka mid ah qoyskiisu ku heley daryeel ilko ah, waa mid ka mid ah bukaanka. "Waxaad ku mashquulsan tahay inta lagu jiro usbuuca, waxaadna ka cabsanaysaa gaadiidka maalmaha dhamaadka todobaadka. Sidaas ayaad sii wadi doontaa dib u dhigista ballanta. Waqtiga ugu dambeeya ee aad u tagto dhakhtarka, dhibaatadu way ka sii dartay. Sidan oo kale, waxaad si dhaqso ah wax uga qaban kartaa. "
Waa maxay "Afrika Afrika"?